About Us - Ningbo Second Hormone Co., Ltd
Ningbo Second Hormone Factory waxaa la aasaasay by 1988. Waxaan la ka go'an in industry taranta xoolaha muddo 30 sannadood ah, oo aan lagu biiriyo wax cayriin, cilmi baarista iyo horumarinta, soo saaridda, baaritaanka, iibka, iyo taageero macaamiisha si wadajir ah u noqon ganacsi oo baaxad wayn leh. Shirkadda Our ayaa la siiyay sida "Zhejiang warshadaha High-casriga ah" oo Cixi Top 20 shirkadood ".
Shirkadda Our ayaa liis dhameystiran oo ah alaabta taranka, iyo alaabta waa kharash-ool ah. Waxaan sidoo kale waxay leedahay API waxyaabaha ugu muhiimsan ee our 'diiwaan gashan. Waxaan leeyahay qolka ugu weyn oo Nadiif ah xoolaha ee gobolka si loo ogaado our waxyaabaha saamaynta ku jireen jiirarkii iyo jiirka. Sidaa darteed, waxtarka iyo xasiloonida of badeecada waa la hubaa. Our hormone taranka qaadataa in ka badan 50% saamiga aad suuqa suuqa beer weyn oo beeralayda dalka oo dhan ayaa. Waxaan nahay qeybiyaha weyn ee Mengniu, Yili, Modern beeraha, caasimada Beijing beeraha, COFCO, Zhongding beeraha caanaha, Wens, Chuying xoola-dhaqatada, koox Chia Tai, caanaha Bright iyo shirkadaha kale ee waaweyn.
Shirkadda Our leeyahay technology aqoonyahanada iyo R & D xoog. dhakhtarkaaga Professional keentay 30 indheer dugsiga caafimaad sida R & D kooxda, si guul leh horumariyo ka badan 100 alaabta, iyo qaar ka mid ah waxyaabaha la dhigay line-soo-saarka. Our chorionic Gonadotropin (HCG) 's qalab ceeriin awoodba (10000iu / mg) waa wax badan oo ka sarreeya heerarka Yurub iyo Maraykanka Pharmacopoeia (4500iu / mg), oo aan ku raaxaysan sumcad caalami ah. Waxaa naga go'an in horumarinta waxyaabaha cusub: chloride D sodium iyo Butylamine saddex Alfa F2 prostaglandin khamriga waa daawo xoolaad diiwaan gashan cusub, oo ku jira suuqa. (Waxaan nahay warshad keliya ayaa ka diiwaan gashan D chloride ilaa hadda.) Shirkadda Our diiwaan Menotropins Durayo (magac kale: Chaopai su).
Waxyaabaha Our shirkadda ee hubkaas ayaa loo isticmaalaa in kalluun, doofaarka, lo'da qor, oo ido ah, xayawaanka, iwm Waayo, kalluunka, waxaan leenahay GnRHa Salmon xarunta la isku duro kalluun dhoobo. Waayo, doofaarka, waxaan hadda ka diiwaangashan tongfasu (magaca hore PC600), oo uu leeyahay saamayn ku suntan la mid ah sida PG600 Intervets '. Our alaabta diiwaangelinta cusub Altrenogest dareere afka ayaa maray Wasaaradda dib u eegis beeraha, oo ha ku dhameysan doono diiwaangelinta ugu dhakhsaha badan. Baarista our Altrenogest in beer weyn oo waaweyn, marka kor u qaadida maamulka Dufcaddii swines ', waxa ay ku gaadhaysaa saamayn la taaban karo; waqti isku mid ah, iyadoo la isticmaalayo PMSG iyo GnRH wada for swines 'bacrin waqti go'an, hagaajinta swines' awoodda taranta. Waayo, xoolo-qorka, isticmaali GnRH iyo D chloride wada for-qorka ee bacrin waqti go'an, waxay leedahay saamayn wanaagsan ee la yirahdo gulkroppshormon, iyo horumarinta xoolo-qorka Heerka uurka.
In ka badan 30kii sano ee la soo dhaafay, waxaan sii wadi inay ku baaqaan in technology sare si ay u bixiyaan alaabta iyo adeegyada wanaagsan in macaamiisheena. Hadafkeenu waa inaga go'an in ay shirkad keentay caalamiga ah in uu leeyahay tayada ugu fiican ee aannu duurka. Aragtidayadu waa waxaan eryan doonaa technology ugu horumarsan dunida iyo indheer-xirfadeed si ay u abuuraan tayada sareeya iyo adeegyada ugu fiican, sidoo kale helaan sumcad iyo saamiga aad suuqa la sumcadda wanaagsan iyo daacadnimada iyo sidoo kale tayada deggan.